प्रेमिकाको मृत्यु::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानको बीपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक पक्राउ
धरानः प्रेमिकाको मृत्युपछि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक पक्राउ परेका छन् ।
धरानको एक होटलमा बसेकी ती युवतीले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । उनको उपचारको क्रममा शुक्रबार बिहान करिब ४ः०० बजे मृत्यु भएको थियो । चिकित्सक र युवती प्रेमीप्रेमिका रहेको खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका प्रहरी निरीक्षक गजेन्द्र रायले जानकारी दिए । उनी डा. करण यादवलाई भेट्न काठमाडौंदेखि धरान आइपुगेकी थिइन् ।
धरान-१० स्थित एक जनहीत होटलमा पर्सा वीरगन्ज घर भएकी २६ वर्षीय प्रकृति सुवेदीले झुण्डिएर आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन । गत मंगलबारदेखि होटलमा बस्दै आएकी सुवेदीले बुधबार दिउँसो आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत डा. यादवलाई भेट्न आएकी उनले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् । गम्भीर अवस्थामा उद्धार गरिएकी सुवेदीको प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा लगिएकोमा अहिले सघन (आइसियु) कक्षमा उपचार भइरहेको थियो ।
रौतहटको पौरही ५ मा विवाह गरेकी ती युवतीलाई डा. यादवले कोठा बुक गरेर राखेका थिए तर होटलमा युवतीले ढोका नखोलेपछि डाक्टर यादव आएर ढोका खोलेका थिए । ढोका खोल्दा उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । तन्नाको पासो लगाएर उनले आत्महत्याको प्रयास गरेकी थिइन् ।
डा. यादवलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको र युवतीको मृत्युपछि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान थालिएको डिएसपी बुद्ध श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनको शव अहिले प्रतिष्ठानमै राखिएको छ । उनले आफन्त आएपछि पोष्टमार्टम गरिने बताए । विवाहित युवती र उनका श्रीमानबीच सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया चलिरहेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।